Ndụmọdụ ọkachamara site na Semalt On Olee otú iji chebe weebụsaịtị WordPress Site na Cyber ​​Criminals
WordPress nche na-akpọkarị "hardening". Ọbụna mgbe ị na-amaghị otú e si emeziwanyentanetị weebụsaịtị gị, ọ dị mkpa ka ị kwado nzere nke saịtị gị. Ọ gaghị abụ ihe na-ezighị ezi ikwu na ọtụtụ nde mmadụ na ọtụtụ ijeri weebụkwadoro site na Blogger ma ọ bụ WordPress.
Nik Chaykovskiy, The Ọkachamara Onye isi ahịa na-eme ihe nchịkwa, na-ekwu na WordPress bụ interface kachasị mma na njirimara enyi. Usoro nlekọta ọdịnaya a nwere ọtụtụnke uru na ọghọm. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịghara idebe okwuntughe gị, ị nwere ike idafu nzere gị na ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị - curso basico de fotografia gratis online.Ebe a nwere ụfọdụ ndụmọdụ na-esi chebe gị WordPress website si hackers.
Weghachite weebụsaịtị Gị Ọtụtụ mgbe
Ọtụtụ ugboro nke nkwado ndabere WordPress bụ otu n'ime isiokwu ndị a na-atụle n'oge a.Ọ dị mkpa na gị WordPress saịtị a kwadoo elu kwesịrị ekwesị. I kwesiri ime otu ugboro ma obu ugboro abuo kwa izu iji chebe onwe gi na ntaneti.Otú ọ dị, nkwado kwa ụbọchị, a na-atụ aro ya nke ọma dịka ọ na-echebe ebe nrụọrụ weebụ gị site na ịmalite ịgha n'iyi na ọgụ mberede. Enwere otutuNtanetị WordPress nke nwere ike inyere gị aka, ma BackupBuddy bụ otu n'ime ihe kacha mma. Ọ ga-efu gị karịa $ 100 ma nwee ike weghachite gịhacked blog ma ọ bụ weebụsaịtị na nanị ihe nke sekọnd. Njikere! Ndabere bụ ngwa mgbakwunye dị mma maka ndị na-achọ software nke free WordPress.Nke a na - ahapụ gị ịmepụta ndabere nke akpaaka, nyefee faịlụ gị na Dropbox, ma weghachite data gị n'oge ọ bụla..Nhọrọ nke ato bụ UpdraftPlus.Ọ bụ mmekọrịta na onye ọrụ-enyi na enyi ndabere plugin.
Mgbalị Nlekọta Nkwụsị
Site n'oge ruo n'oge, hackers na-agbalị imebi gị WordPress nrụọrụ weebụ site na guessing gịokwuntughe. Ọ bụ ya mere ị ga-ejedebe nbigata nbanye iji nọrọ na nchekwa na ịntanetị. Site na ndabara, WordPress ga-ekwe ka ị jiri okwuntughe dị iche iche,nke na-achọ ime ka ozi gị dị nchebe na nchekwa. Ikwesiri ịgbakwunye nchekwa nchekwa nke nchekwa na ebe nrụọrụ weebụ gi site n'inwe ohere inweta abụọ gaaugboro atọ. Ọ bụrụ na ọ gbalịrị ịbanye na paswọọdụ ezighi ezi, saịtị gị ga-ekpochi, ma data ya ga-adịgide adịgide. E nwereọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke plugins WordPress, dịka Mgbalị Nkwụsị Nkwụsị. Nke ahụ na - eme ka ị belata ọnụ ọgụgụ nke mgbalị nbanye nkwụsị. Iji ngwa mgbakwunye a, ịnwekwara ike igbochi ọtụtụ IP, ma ọ dị mkpa na ị na-echeta paswọọdụ gị. Ma ọ bụrụ na ndị na-agba ọsọ na-eji proxies dị iche, ngwa mgbakwunye a gana-egbochi ha niile iji chebe ebe nrụọrụ weebụ gị. Nhọrọ ya niile bụ omenala na onye ọrụ enyi. Ị nwere ike igbochi IP ruo nwa ogena-adịgide adịgide.
Ejila "Admin" dị ka Aha njirimara gị
Otu n'ime ihe kachasị emehie ndị mmadụ bụ na ha na - eji "admin" dị ka aha njirimara ha.I kwesịghị ime nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-edebe mkpokọta WordPress gị na ebe nchekwa. Bots na-ejikarị ngwa ngwa enweta weebụsaịtị na iji okwu a ma nwere ikecheta okwuntughe na oge. E nwere ohere ndị omempụ ga-eji ozi nzuzo gị, data weebụ, na ihe ndị ọzọ jiri nke aaha njirimara. Ọ bụrụ na ịchọrọ idebe saịtị gị, ọ dị mkpa ka ị ghara iji "admin" dị ka aha njirimara mbụ gị. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrịhọrọ aha njirimara na paswọọdụ, nke na-agaghị ekwe omume ka mmadụ chee.